Iindaba - Ubhubhane weCoronavirus ubangela ingxaki yengxowa yokuhambisa
Nabani na ofuna ukuthumela ngenqanawa into enkulu- okanye into eninzi yento encinci-urenta into eyaziwa ngokuba sisiqulatho esiphakathi kwenjongo. Kodwa ayingomsebenzi olula ngalo mzuzu- akukho zibhokisi zothutho zaneleyo ezikhoyo. Ukuthenga isikhongozeli akukho lula nako.
Iphephandaba lemihla ngemihla laseJamani iFrankfurter Allgemeine Zeitung kutsha nje ukuba zimbini kuphela iinkampani emhlabeni ezakha kwaye zithengise izikhongozeli zokuthumela - zombini zizinze e China.
Nabani na eYurophu ofuna ukuyithenga unokuyifumana ngesandla: Nezona zikhongozeli zitsha zilayishwa kuqala eTshayina kwaye zisetyenziselwa ukuthunyelwa kube kanye ngaphambi kokuba zibekhona.
Kutheni ukuhambisa kwamaxabiso kunyuka nje?
Iindleko zokurenta kunye nokuhambisa zonyukile. Phambi ko-2020, ukuhambisa ikhonteyina esemgangathweni yeenyawo ezingama-40 (iimitha ezili-12) kwinqanawa ehamba ngenqanawa yaseTshayina ibiza malunga ne- $ 1,000 (€ 840) -ngoku nje, umntu kufuneka ahlawule ukuya kuthi ga kwi-10,000 zeedola.
Ukunyuka kwamaxabiso kuhlala kungumqondiso wokungalingani. Kule meko, luphawu lokunyuka kwemfuno (yezikhongozeli okanye indawo yokuthumela) kunye nokudodobala okanye nokuncipha konikezelo.
Kodwa kukho ukunqongophala kwendawo yenqanawa ngalo mzuzu. URolf Habben Jansen, umphathi wefemishinari uHapag-Lloyd uxelele iphephancwadi laseJamani iveki nganye iDer Spiegel.
Abanini beenqanawa abaninzi batyale imali encinci kwizithuthi zabo kule minyaka idlulileyo, utshilo, “kuba khange bafumane ndleko ye capital kwiminyaka emininzi. Akukho mntu wayelindele ukuba ibango liphezulu lezothutho lokuhambisa ngenxa yobhubhane. Akusayi kubakho zinqanawa kwixesha elifutshane. ”
Ngaphandle kwendlala yexesha elifutshane, ingxaki ayisiyiyo kuphela malunga nenani elaneleyo leebhokisi ezintsha. Izikhongozeli phantse azikaze zisetyenziselwe ukuhambisa ixesha elinye kwaye endaweni yoko ziyinxalenye yenkqubo yehlabathi.
Ngokukhawuleza nje ukuba ikhonteyina elayishwe iithoyi zaseTshayina, umzekelo, ithululwe kwizibuko laseYurophu, iya kugcwaliswa ngeempahla ezintsha kwaye emva koko ithathe izixhobo zomatshini waseJamani ziye eAsia okanye eMntla Melika.
Kodwa unyaka ngoku, bekunzima ukugcina iithayimthebhile zehlabathi ezilawula ukuthunyelwa kwelinye ilizwe, njengoko ubhubhane we-COVID-19, oqale ekuqaleni kuka-2020, uqhubekile nokuphazamisa urhwebo lwehlabathi.
iveliso ezifakiwe, Imephu yendawo, AMP Iselfowuni Umgangatho wePuzzle wePuzzle, Umgangatho wePuzzle, Umgangatho wePuzzle yePuzzle, Umgangatho weMat Puzzle, Umgangatho wePuzzle Mat Cushion, Umgangatho wePuzzle wokuzilolonga iMat, Zonke iiMveliso